Ngamunye wethu kunezimo lapho voltage ngokweqile kuyinto isimiso sezinzwa. Life nobunzima, izingxabano emkhayeni nasemsebenzini - it is kuphela ingxenye encane yokucindezeleka indoda kumelwe ubhekane njalo. Ngenxa yalokho, kukhona ukukhathazeka, kanye nokuntengantenga psycho-ngokomzwelo, ukucobeka, ukulahlekelwa amabutho mzimba zomzimba, ukuqwasha kanye neziqubu ukwethuka.
Ukuze sisekele isimiso sezinzwa abekho embonini yokwenziwa kwemithi yesimanje ukhiqiza akhiphe valerian. Ungakwazi ukuthenga nganoma ekhemisi wangakini.
Valerian akhiphe incwadi yeziyalezo eyethula kwethu kuze kube yilolu izidakamizwa has izinhlobo ezihlukene ukukhululwa. Lokhu kungaba yemifino izinto zokusetshenziswa kugaywa futhi ngesimo pellets noma powder, kanye amaphilisi kanye alcoholate.
Valerian akhiphe incwadi yeziyalezo echaza ketshezi esebenzayo, wenza kusukela ezimpandeni futhi rhizomes izitshalo zokwelapha. Kuyinto lezi zitho amakhambi ephulukisa nomphumela ekwelapheni.
Valerian akhiphe umyalelo ku isicelo eyethula ukuba izakhiwo eziyinhloko kwemithi zomuthi, uyakwazi ngcono ukusebenza imithambo yegazi nemithambo ye inhliziyo, futhi isimiso sokugaya ukudla bungene. It has a isitshalo futhi sizole. Ngenxa yalokho ngokulunywa ngale izidakamizwa kunciphisa excitability Izinzwa futhi aqede izinhlungu zibe of imisipha abushelelezi, kanye emithanjeni. Lesi sidakamizwa uyakwazi uvuleke imithambo yegazi.
Valerian akhiphe incwadi yeziyalezo eyethula nathi endaweni ukusetshenziswa kwezidakamizwa, bathathwa imikhuhlane nesokuwa, ukwethuka nokucindezeleka eqinile sezinzwa. Indlela esetshenziswa kabanzi kwezidakamizwa migraine kanye lesizalo amajaqamba. It bancome lokhu ikhambi izinkinga ezazibangelwa ukwahluleka indlala yegilo futhi abesifazane menopausal. Siyobona ukusebenzisa kwayo ukumnika of valerian impande somoya kanye nenyumoniya. Kungaba ukungezwa ngenkathi ethatha okugeza njengendlela aid ubuthongo. Ngenxa yalezi zinjongo ukulingana ukumnika noma powder.
Valerian akhiphe, okuyinto umyalelo kufanele ufunde ngaphambi kokusetshenziswa, ine isinyathelo okuhloswe ngazo imikhumbi okwandisa igazi, okuyinto kunciphisa umfutho wegazi. Lokhu umuthi ezihlukahlukene (ngaphandle liqueurs), Kunconywa izingane ongaphansi kokwesaba nesokuwa, neziyaluyalu zezinzwa. Siza izingane ewayini, namabhati decoction of valerian impande. Ngemva kokufa kwemizimba yabo reception akusho Sula. Vele zihambisana ishidi noma inabukeni ingane futhi abulawe embhedeni, kokuba esongwe ngengubo yokulala efudumele. Kuphethe inqubo enjalo kufanele kwenziwe njalo ngemva kosuku.
Mayelana nokulahla omdala ukuqwasha, eyaba imbangela ezinzwa ubunzima, lokuhlushwa valerian tincture wokuhlamba ukuqiniswa. Extract kabanzi ukubuyisela umsebenzi wokugaya ukudla. reception yakhe ngcono isifiso sokudla. In izifo ezihlukahlukene kwesibindi kanye Amapayipi elise esinyeni nenyongo, umuthi usetshenziswa njengesibonelo cholagogue. Iphinde isetshenziselwe ikhono layo ukuze akhulule zibe ukubuyisa. Ezinconyiwe valerian akhiphe yokuthuthukisa uketshezi kwamanyikwe nasesiswini. Izingane ezincane valerian akwazi ukuqeda ubuhlungu besisu kubangelwa abampofu imfucuza amagesi.
Ukwamukelwa kwalesi izidakamizwa kumele kwenziwe ngokuqinile ngokuvumelana izincomo udokotela. Valerian kukhishwe, ukweqisa izidakamizwa noma idlula isikhathi imithi oyinikiwe is contraindicated, kungadala engadingeki side effects. Yavleyutsya zimpawu: ukozela futhi kwehle ukusebenza, kanye nesifo sokucindezeleka futhi ukungakhuli umsebenzi wokugaya ukudla. Esimeni nemiphumela engemihle edingekayo Isikali ukunciphisa noma ukumisa ephelele izidakamizwa.
Sociology Ezemfundo: Definition, kuncike kanye nemisebenzi
Becici lolwandle, Montenegro: incazelo, izici kanye nokubuyekeza
Phumla e-Yalta ngomnyaka omusha